Tag: mozika finday | Martech Zone
Tag: mozika finday
Tsy miresaka firy momba ny indostrian'ny mozika eto amin'ny bilaogy teknolojia marketing izahay, saingy, angamba, iray amin'ireo ohatra lehibe amin'ny fanovana ny fitondran-tenan'ny mpanjifa izany. Nifindra avy amin'ny haino aman-jery mozika izahay ho lasa fitaovana mozika… ary izao dia mifindra amin'ny fitaovana mankany amin'ny streaming izahay. Nilaozako tanteraka mihitsy ny iTunes ary ampiasaiko amin'ny Spotify daholo izao. Ny Discovery dia mitranga amin'ny alàlan'ny tambajotran-tserasera misy ahy ary amin'ny alàlan'ny radio Spotify izay mitambatra toy ny tsiro mozika hanomezana sakafo vaovao.
Iray ihany Wal-mart. Wal-mart dia orinasa iray ihany no manana tolo-kevitra sarobidy: ny vidiny mora. Izy io dia miasa miaraka amin'i Wal-mart satria afaka mivarotra ilay vokatra mitovy mora kokoa izy ireo noho ny fivarotana antsinjarany manaraka. Tsy Wal-mart ianao. Tsy afaka mandeha miasa ianao hamantatra ny fomba hampihenana ny vidiny isan'andro. Ary ianao koa tsy tokony. Tsy manam-paharoa ny orinasanao ary tsy misy atolotry ny orinasa hafa. Ny tanjonao amin'ny varotra dia tokony hanavaka ny tenanao eo afovoanao